Snapdragon Yiri 3100: The processor maka eyi OS ese | Gam akporosis
Snapdragon Yiri 3100: Ihe nhazi ọhụụ maka Wear OS
Edere Ferreno | | smartwatch
Ọnwa ole na ole gara aga, ọnwa nke Mee, mbụ nụ banyere Snapdragon Wear 3100, Qualcomm ọhụrụ processor maka smartwatches. Mgbe ị nwesịrị data mbụ banyere ihe nhazi a, amachaghị banyere ya, ruo ugbu a. Ebe ọ bụ na onye nhazi ọhụrụ a emesịala gosipụta ya n'ihu ọha, nke anyị ga-ahụ na nche na Wear OS.
Otu n'ime atụmatụ ndị dị na Snapdragon Wear 3100 bụ nke ahụ na-ekwe nkwa nnwere onwe ka ukwuu maka nche. Otu akụkụ nke doro anya na ọ dị mkpa ka mma. Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ihe ọhụrụ Qualcomm processor ga-ahapụ anyị.
Enwere ike ikwu na nhazi a bụ nke mbụ Qualcomm kere kpọmkwem maka nche. Nlereanya ya gara aga, Wear 2100, bụ mmegharị nke Snapdragon 400. Yabụ enwere ọtụtụ akụkụ dị mkpa iji meziwanye. N'ụzọ dị mma, nke a na-eme na nhazi ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, nke e mere iji mee ka smartwatches dị ike.
1 Autonomy: Isi okwu siri ike nke Snapdragon Wear 3100
2 Nka na ụzụ nkọwa Snapdragon eyi 3100
Autonomy: Isi okwu siri ike nke Snapdragon Wear 3100
Enweela mmekọrịta chiri anya n'etiti Google na Qualcomm ka mma ịghọta ihe ịma aka na okwu Wear OS onyinye. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịmepụta nhazi nke ga-enye arụmọrụ ka mma maka ụdị ndị a. Anyị nwere nkọwa mbụ gbasara Snapdragon Wear 3100 a.
Ọ ga-enwe cores anọ 7nm Cortex-A28. Nke a abụghị ihe emechaala ka onye ọ bụla kwenye, bụ ndị na-ahụta ya dị ka nke enweghị isi na nke a. Anyị ga-ahụ ya ka ọ na-arụ ọrụ iji chọpụta ya nke ọma. The processor ga ogide naanị 22 mm n'ime ese. Nnọọ ọkụ na obere nha. Ọ ga-enwekwa ngalaba-nhazi na DSP.
Ọ bụ ezie na anyị agwaworị gị na nnwere onwe bụ isi okwu nke Snapdragon Wear 3100. Ná nkezi, a na-atụ anya na enwere ike inwe onwe nke elekere di elu n'etiti awa 2 ruo 12, na-akwanyere ụdị ndị nwere nhazi mbụ. N'ụzọ ezi uche dị, ọ dabere n'iji ya eme ihe.
Ga-enye anyị a enwe ikike nke ihe ruru awa iri na ise n'iji GPS na ihe mmetụta obi, nke ga-enwetakwa akara ngosi ziri ezi nke ga-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Ná nkezi, a na-atụ anya batrị elekere na Wear OS nke na-eji ihe nhazi a arụ ọrụ ihe dị ka ụbọchị iri atọ. Obi abụọ adịghị ya, otu akụkụ nke ndị na-azụ ahịa ga-elebara anya nke ọma.
Anyị kwuru na Snapdragon Wear 3100 ga-enwe DSP na ngalaba-nhazi. Ihe omuma DSP ohuru na-aga na-elekọta ngwaọrụ mmetụta. N'ụzọ dị otú a na ọ ga-enye ha ohere ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi karị n'oge niile. Tụkwasị na nke ahụ, ngalaba-nhazi ahụ dị mma maka ọrụ ugboro ugboro, yabụ onye nhazi isi ga-ata ahụhụ obere ọrụ.
Nka na ụzụ nkọwa Snapdragon eyi 3100
Companylọ ọrụ ahụ ekenyelarị nkọwa teknụzụ kachasị banyere ihe nhazi a, ya mere anyi nwere nghota doro anya banyere ya. Na mgbakwunye ịbụ data nke mmasị ndị nwere nghọta karịa na mpaghara a. Ndị a bụ nkọwa nke Snapdragon Wear 3100:
CPU: Quad-isi Cortex-A7 ruru 1,2 GHz
GPUỌkwa: Qualcomm Adreno 304
Modem: Qualcomm Snapdragon X5 LTE na ọsọ nke 1 Gbps nbudata na bulite 150 Mbps
Ihe mmetụta ebe: GPS, GLONASS, Galileo na Beidou
Qualcomm Voice Suite na Voice ebighị
Qualcomm Aqstic audio codec na ampilifaya
Noise na nkuzi mgbameji akagbuo
Ruo mgbe elekere mbụ na ahịa na nhazi a rutere, anyị agaghị echere ogologo oge. E nwere ike ịzụta ụdị OS eyi tupu ngwụcha afọ -eji nke a Qualcomm processor. Na mgbakwunye, anyị nwere aha ole na ole ndị yiri ka ekwenyela ga-eji ya. Kpọmkwem, ụdị ndị ahụ.
Dị dị ka Fosil, Louis Vuitton na Montblanc ekwenyela na nke a na maka ekeresimesi anyi nwere ike icho anya nche ohuru n’aka gi. Modelsdị ndị a niile ha ga-ebupụta ga-eji Wear OS ma nwee Snapdragon Wear 3100 n'ime ha. Anyị nwere olile anya ịmatakwu banyere elekere ndị a n'oge adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Snapdragon Yiri 3100: Ihe nhazi ọhụụ maka Wear OS
A ga-enye ndị ntorobịa Xiaomi Mi 8 na September 19
Enwere ike igosi OnePlus 6T na Ọktọba 17